[ March 29, 2020 ] မွေးနေ့ ရက်များက ပြောသော လူတယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ	KNOWLEDGE
[ March 29, 2020 ] ခြင်မကိုက်စေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းတွေ	KNOWLEDGE
၁၇ နှစ်ကျော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေအိမ်ကို စည်ပင်က ဖယ်ရှားခိုင်း
February 23, 2020 Alinn Pya Comments Off on ၁၇ နှစ်ကျော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေအိမ်ကို စည်ပင်က ဖယ်ရှားခိုင်း
ကျူးနေအိမ်များကို ဖျက်သိမ်းနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတော့ ပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကျအောင် စည်ပင်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်နေတာလား” ဟု မေးခွန်းထုတ် ၁၇ နှစ်ကျော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေအိမ်ကို စည်ပင်က ဖယ်ရှားခိုင်းတဲ့အတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် ဖေဖော်ဝါရီ(၂၃) AlinnMyay(အလင်းမြေ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့ ပတ္တမြား ရပ်ကွက် ၂၅ လမ်းနဲ့ စက်မှုဇုံ (၆)လမ်းထောင့်မှာ ၁၇ နှစ်ကြာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်ကို စစ်ကိုင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ဖယ်ရှားပေးရန် နို့တစ်ပေးခဲ့တာကြောင့် […]
(2) မိနစ်အတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူ အိပ်ပျော်သွားစေမယ့် နည်းလမ်း
February 23, 2020 Alinn Pya Comments Off on (2) မိနစ်အတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူ အိပ်ပျော်သွားစေမယ့် နည်းလမ်း
ညဘက်မှာ အိပ်မပျော်ခြင်းက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လူအများစုက အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် ဆေးတွေ သောက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ အိပ်ဆေးတွေ သောက်တာကလည်း မကောင်းပါဘူး။ ခြေထောက်ကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းကလည်း လျင်လျင်မြန်မြန် အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ အဆင့် ၁ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခြေမထိပ်ကို လက်ညိုးနဲ့ စက်ပိုင်းပုံစံနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ ခြေမကို လက်ညှိုးနဲ့ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် ဖိထားပါ။ အဆင့် ၂ အဆင့် ၂မှာ ခြေမကို လက်မနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးရမှာပါ။ […]
February 23, 2020 Alinn Pya Comments Off on တိုက်ဆိုင်လို ့မခံႏိုင်ရင် ဘလော့သွားပါ
February 23, 2020 Alinn Pya Comments Off on တောင်ကိုရီယား မှာ ဝူဟန် အသေမြန်ရောဂါ စိုးရိမ်ရလို့နိုင်ငံကို အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်
February 23, 2020 Alinn Pya Comments Off on ငါးဖမ်းစက်လှေပေါ်မှာ မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ရေလုပ်သားနှစ်ဦး ရုတ်တရက်လဲကျသေဆုံး
သေဆုံးသူ စောင့်ကြည့်လူနာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ စစ်ဆေးချက် သတင်းထုတ်ပြန်
နာမည် သိရုံဖြင့် စိတ်ဓါတ်ကို အလွယ်တကူသိနိုင်ပီ
နာမည်အစစာလုံးက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့အကြောင်း
ပြည်တော်ပြန်(၈)ဦး နေအိမ်သို့ခိုးပြန်၊ ပြန်လည်ခေါ်ယူပညာပေး
သေဆုံးသူ စောင့်ကြည့်လူနာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ စစ်ဆေးချက် သတင်းထုတ်ပြန် မတ် ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၄ နာရီက သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်၁၉ စောင့်ကြည့်လူနာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေကိုအမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းဌာနကို ပို့ဆောင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး မတ်လ ၂၉ ရက် ည ၁၀နာရီခွဲအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမတွေ့ရှိ ( Negative ) ကြောင်း ကျိုက်ထိုမြို့လူမှုကူညီရေးအသင်း သတင်းတစ်ရပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အစောပိုင်းသတင်း > မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်မှာ […]
နာမည်ကိုသိရုံနှင့်် စိတ်ဓါတ်ကို သိနိုင်အောင် တွက်နည်း သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့လူသိများသောအမည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။ အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ = ၁ က-ခ-ဂ-ဃ-င. = ၂ စ-ဆ-ဇ-စျ-ည. = ၃ ယ-ရ-လ-၀. = ၄ ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ. = ၅ သ-ဟ. = […]
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ဟာ သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို ဖော်ပြလေ့ရှိတယ်လို့ ယုံပါရဲ့လား။ ဥပမာ သူ့နာမည်က Su Su ဆိုရင် နာမည်အစ စာလုံးက S ပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့နာမည်အစစာလုံး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သိချင်တဲ့လူရဲ့ နာမည်အစစာလုံးကိုကြည့်ပြီး သူက ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ အကဲခတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ A, H, I, O, Y ဂျိုကာနဲ့တူတဲ့လူတွေပါ။ လူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သူတွေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဝမ်းနည်းတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ တခြားစိတ်ခံစားချက်တွေကို ဘယ်သူမှမသိအောင် […]
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် (၁၀)မြို့နယ်ဆောင်တွင် ပြုလုပ်ထားသော Quarantine Center မှ သီရိမြိုင်ရပ် မွန်စုနေ ပြည်တော်ပြန် (၈)ဦး နေအိမ် ခိုးပြန်သွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ၎င်း ခိုးပြန်သွားသူ ပြည်တော်ပြန် (၈)ဦးအား အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှပြန်လည် ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပြီး မော်လမြိုင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမင်းဟန်တို့မှ ပညာပေးပြောပြပြီးခိုးပြန်ရခြင်း အကြောင်းရင်းအား စစ်ဆေး မေးမြန်းရာအကြောင်းပြချက်က ပဉ္ဇင်းတက်ရန် နှင့် ၎င်းတို့အား ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ရက် မှားယွင်း၍ ခေါ်ဆောင်လာခြင်း ဖြစ်၍ ပြန်ရခြင်း […]
မွေးနေ့ အလိုက် တိရိစ္ဆာန်အကောင်လေး များနဲ့ တင်စားထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ အမှုအကျင့်တွေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်မွေးနေ့ရက်လေးနဲ့တွက်ကြည့်ရတဲ့ ဗေဒင် လေးကို ပြန်လည်ကူးယူ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတို့လည်း ဗေဒင် ဝါသနာ ပါသည်ဖြစ်စေ ဝါသနာ မပါလည်း အပျော် သဘောလေးတော့ တွက်ကြည့် လိုက်နော်…….. ။ (၁)ဇန်နဝါရီ ၀၁ – ၀၉ ခွေး ၁၀ – ၂၄ ကြွက် ၂၅ – ၃၁ […]
ခြင်မကိုက်စေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းတွေ
သင့်အိမ်မှာ ခြင်တွေ အရမ်းပေါနေလာ.? ခြင်မကိုက်စေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နွေရာသီရောက်လာနဲ့အမျှ ညနေခင်းတွေဆို အပြင်မှာ လေညှင်းလေး ထွက်ခံရင်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူချင်ကြမှာပါ။ဒါပေမယ့် ခြင်ကိုက်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရကြပါတယ်။ခြင်ကိုက်တဲ့အခါ ယားယံတာ၊ ယောင်ရမ်းတာတွေအပြင် များစွာသောရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ ခြင်မကိုက်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ကြက်သွန်ဖြူစားပါ ကြက်သွန်ဖြူအနံ့ကို ခြင်တွေအပြင် တခြားအငး်ဆက်ပိုးမွှားတွေက မခံနိုင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် ကြက်သွန်ဖြူစားပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ခံတွင်းမှာ ကျန်နေတဲ့အနံ့ကြောင့် […]